राजकुमार रावका ५ राम्रा फिल्म, युट्युबमा :: Setopati
राजकुमार रावका ५ राम्रा फिल्म, युट्युबमा
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, भदौ २०
अचेल बलिउड हिरोको परिभाषा फेरिएको छ। सामान्य पात्र, मसिना घटना र साना ठाउँका कथाले महत्व पाउन थालेसँगै कथा सुहाउँदो चरित्रको महत्व बढेको छ। नयाँ 'कन्टेन्ट'सँगै नयाँ अभिनेता-अभिनेत्रीको महत्व र माग बढिरहेको छ।
त्यही मागले पछिल्लो एक दशकमा नयाँ पुस्ताका आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, राधिका आप्टे, ऋचा चड्डालगायत धेरै नयाँ प्रतिभा जन्माइसकेको छ। तिनैमध्ये एक होनहार अभिनेता हुन्, राजकुमार राव।
हिरोभन्दा कन्टेन्ट महत्वपूर्ण ठान्ने राजकुमार फिल्मको विषय र चरित्रको मागअनुसार भूमिका गर्छन्। चरित्रमा अभिनय गर्ने नभई चरित्र नै बाँच्ने सोचले काम गर्ने उनले छोटो समयमा बलिउडमा लोभलाग्दो छलाङ मारेका छन्। व्यावसायिक रुपमा सफल हुनु र समीक्षकको नजरमा पनि पटक पटक उत्कृष्ट बन्न सक्नु राजकुमार रावको खासियत हो।
युट्युबमा उपलब्ध उनका पाँच राम्रा फिल्म यहाँ समावेश गरिएको छ।
शाहिद (२०१३), निर्देशक हंसल मेहता
फिल्मको आरम्भमै एउटा हिंसात्मक घटनापछि शाहिद (राजकुमार राव) प्रहरीद्वारा समातिन्छन्। निर्दोष भए पनि उनलाई आतंकवादीको आरोपमा जेल हालिन्छ। जेलमा उनलाई सात वर्ष राखेपछि बल्ल निर्दोष करार गरिन्छ। जेल बसाइका क्रममा उनले आफूजस्तै बिना कारण आतंकवादीको आरोप लगाइने अरू पात्रका मर्म बुझ्ने मौका पाउँछन्। यही तीतो अनुभवले उनलाई बिना कुनै कसुर आतंकवादीको आरोप लगाई वर्षौं जेलमा राखिने निर्दोषका पक्षमा लड्ने प्रेरणा मिल्छ।
जेलमा समयको सदुपयोग गर्दै कानुन विषय पढेका उनी बाहिर निस्केर ल फर्ममा काम गर्छन्। तर वकिलहरूले न्याय दिलाउनभन्दा पैसा कमाउन जोड दिने वातावरणमा उनी टिक्न सक्दैनन्। यही असन्तुष्टिपछि उनी आफ्नै ल फार्म खोल्छन्। बिस्तारै उनको उद्देश्य नै गरिब, असाक्षर र आतंकवादको बिल्ला लगाइएका निर्दोष मुस्लिमका पक्षमा लडेर मुद्दा जित्नु हुन्छ।
ल फार्म खोलेपछि शाहिद कसरी बेकसुर मान्छेको पक्षमा लड्छन्? यस क्रममा पारिवारिक र व्यवसायिक जीवनमा उनले कस्ता अड्चन झेल्छन्? यही फिल्मको कथा हो।
फिल्मले मुख्य पात्र शाहिद मार्फत भारतको प्रहरी, प्रशासन र कानुनका विभिन्न कमजोर पाटा आलोचनात्मक हिसाबले उजागर गर्छ। खासगरी मुस्लिम जति सबैलाई आतंकवादी देख्ने राज्यको नजरियाप्रति पनि फिल्मले पुनर्विचार गर्न जोड दिन्छ।
अकारण जेल बस्ने युवादेखि जुझारु वकिलका रुपमा राजकुमार रावले मन जित्ने अभिनय गरेका छन्। आफ्नो सशक्त अभिनयका लागि उनले यो फिल्मबाट नेसनल फिल्म अवार्ड र फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जितेका थिए। 'शाहिद' टोरन्टो इनटरनेसनल फिल्म फेस्टिभल, मुम्बई फिल्म फेस्टिभल, दुबई इन्टरनेसल फिल्म फेस्टिभललगायत धेरै महोत्सवमा प्रदर्शन भएको थियो। फिल्मका लागि निर्देशक हंसल मेहताले पनि नेसनल फिल्म अवार्डलगायत अरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जित्न सफल भएका थिए।
'शाहिद' वकिल तथा मानवअधिकारवादी शाहिद आजमीको वास्तविक जीवनमा आधारित फिल्म हो। सात वर्षको कार्यकालमा उनले थुप्रै आतंकवादीको आरोप लागेका निर्दोषका पक्षमा लडेर मुद्दा जितेका थिए। उनको मृत्युपछि उनीबाट धेरै मुस्लिम युवालाई न्यायको पक्षमा लड्ने उत्प्रेरणा मिलेको थियो। २०१० फेब्रुअरी ११ मा शाहिद आजमीको मुम्बईस्थित उनकै कार्यालयमा गोली हानी हत्या भएको थियो।
फिल्ममा केके मेनन, प्रबलिन सन्धु, तिमांशु धुलिया, प्रबल पंजाबी आदि कलाकार पनि मुख्य भूमिकामा छन्।
काइ पो चे (२०१३), निर्देशकः अभिषेक कपुर
फिल्ममा राजकुमार राव गोविन्दको भूमिकामा छन् भने सुशान्तसिंह राजपुत इशान र अमित साध ओमी पात्र बनेका छन्। यी तीन मित्रको एउटै सपना हुन्छ- खेलकुद पसल र क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने।
यी तीनमध्ये एक जनाले अंकलसँग ऋण माग्ने, अर्काले हिसाब-किताबको जिम्मेवारी सम्हाल्ने काम गर्छन्। पूर्व जिल्लास्तरीय क्रिकेटर इशान किशोर तथा युवाहरूलाई क्रिकेट सिकाउने काम गर्छन्। उनीहरूको काम र जीवन ठिकठाक चलिरहेको हुन्छ।
तर ओमीको राजनीतिमा लागेका अंकलको सहयोग लिएसँगै उनीहरूको मित्रतामा पनि राजनीतिले दरार बढाउन थाल्छ। सन् २००० आसपासको परिवेश समेट्ने यो फिल्ममा अहमदाबादको २००१ को भुइँचालो र २००२ को गुजरातको धार्मिक जातीय दंगाले वर्षौंको मित्रता र काममा संकट ल्याउँछ।
'काइ पो चे' निर्देशन, कथा, अभिनय, स्क्रिनप्ले र संगीतका लागि प्रशंसा पाउन सफल फिल्म हो। फिल्मबाट राजकुमार राव र सुशान्तसिंहको अभिनयले तारिफ पाएको थियो।
सिटी लाइट्स (२०१४), निर्देशक हंसल मेहता
संसारभर बाध्यता वा रहरले सानो सहरबाट राम्रो अवसरको खोजीमा ठूलो सहर छिर्ने धेरै हुन्छन्। राजस्थानमा साडीको पसल चलाउने दीपक र राखीको राजस्थानबाट मुम्बई जाने यात्रा भने बाध्यात्मक छ। उनीहरूका साथमा सानो छोरा पनि छन्।
मुम्बई सहरमा एक जना पनि परिचित नभेटेपछि उनीहरू बास र गाँसको संकटमा परिहाल्छन्। मुम्बईका उज्याला-अँध्यारा गल्लीगल्लीमा भड्किएपछि दीपक र राखीले बाँच्नका लागि सम्झौता गर्नुपर्छ।
त्यो सम्झौता के हो? त्यो सम्झौताले उनीहरूको जीवन सुखमय बन्छ वा संकटमय? 'सिटी लाइट्स' फिल्मको मुख्य कथा यही हो। सहरमा पैसाका लागि एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई कतिसम्म प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा देख्न पाइन्छ।
यो बेलायती निर्देशक सिन एल्लिसको 'मेट्रो मनिला' फिल्मको हिन्दी रिमेक भए पनि 'सिटी लाइट्स' भारतीय समाजको कथा भन्न सफल छ। सन्तानसहितको दम्पत्तीको सपना र संघर्ष चित्रण गरिएको 'सिटी लाइट्स'ले आधुनिक समयमा सहरको भीडमा हराउने धेरै मान्छेको जीवनको कथा प्रतिनिधित्व गर्छ।
'शाहिद' र 'सिटी लाइट्स' का निर्देशक एकै हुन्। शाहिद र दीपकको भूमिकामा उनै राजकुमार राव हुन्। तर यी दुई पात्रका बोली, हाउभाउ र अभिनय फरक लाग्छन्। चरित्रमा डुबेर काम गर्ने राजकुमारले 'सिटी लाइट्स'मा पनि उत्तिकै जबर्जस्त अभिनय गरेका छन्। रेखाको भूमिकामा पत्रलेखा र विष्णु सरको भूमिकामा मानव कौल पनि जमेका छन्।
'मुस्कुराने कि वजह तुम हो', 'सोने दो', 'एक चरैया'जस्ता गीतले पनि फिल्मको सबल पक्ष हो।
ट्रयाप्ड (२०१६), निर्देशकः विक्रमादित्य मोटवानी
कोरोना कहरको लम्बिदो संकटले संसारभरका मानिसलाई एक्लोपन के हो भन्ने कुरा मजैले बुझाइदिएको छ। यो समयमा तपाईंले 'ट्रयाप्ड' हेर्नुभयो भने फिल्मको पात्रसँग झनै नजिकबाट जोडिनु हुनेछ।
'ट्रयाप्ड' ३५ तल्लाको एउटा फ्ल्याटमा कयौं दिन-रात एक्लै बन्द भएको पात्र सौर्य (राजकुमार राव) को कथा हो। सौर्य यस्तो अभागी पात्र हो, जो आफ्नो प्रेमिकासँग नयाँ जीवन सुरू गर्ने उत्साहसहित नयाँ फ्ल्याटको खोजीमा त्यो अपार्टमेन्टमा पुगेका हुन्छन्।
'उडान' र 'लुटेरे' फिल्मका निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानीले यो फिल्मलाई रोचक 'सर्भाइभल ड्रामा' बनाउन कुनै कसर छोडेका छैनन्। राजकुमार रावको उत्कृष्टमध्येको एक यो फिल्ममा उनको चरित्रमा परिस्थिति अनुसारको रुपान्तरण र सोहीअनुरुप अभिनय भेटिन्छ। जुनसुकै कारणले भए पनि थुनिनु उकुसमुकुस हुनु हो। 'ट्रयाप्ड'को कथा, यसका घटनाक्रम र मुख्यपात्रको अभिनयले तपाईंलाई पनि उकुसमुकुस बनाउनेछ। यही नै फिल्मको मुख्य विशेषता हो।
दुर्भाग्यवश 'ट्रयाप'मा परेको पात्रले आफूलाई त्यहाँभित्र टिकाइराख्न र त्यहाँबाट बाहिर निस्कन गर्ने संघर्ष निकै रोचक छ। फिल्मभित्र मान्छेबिनाको फ्ल्याटमा मुसासँग संवाद गर्ने दृश्य होस् वा आफ्नै औंला काटेर बाहिरका मान्छेलाई सन्देश लेखी पठाउने प्रयास, मन छुने धेरै कुरा छन्। फिल्मको साउन्ड डिजाइन र सम्पादनका लागि फिल्म फेयर अवार्ड दिइएको थियो। अचम्मको परिस्थितिसँग जुध्ने पात्रको भूमिकामा गरेको अभिनयका लागि राजकुमार रावले उत्कृष्ट क्रिटिक्स अवार्ड जितेका थिए।
धेरै भाग एक्लो पात्रका गतिविधि समेटिएको यस फिल्ममा नुरी पात्रका रुपमा गीताञ्जली थापाको छोटो तर महत्वपूर्ण भूमिका छ।
न्युटन (२०१७), निर्देशकः अमीत भी मसुरकर
राजकुमार रावका समीक्षकहरूले सराहना गरेका एक से एक प्रशंसित फिल्म छन्, तीमध्ये 'न्युटन' अलि खास मानिन्छ। आमाबुबाले राखिदिएको नुतन कुमार नामको नुलाई न्यु र तनलाई टन बनाई न्युटन नाम जन्मेको हो। आफ्नो पुरानो नामका कारण मजाकको पात्र बन्नु परेपछि नयाँ न्वारान गर्ने न्युटन वैज्ञानिक नभएर आदर्शवादी युवा हो। यिनै आदर्श पात्र मार्फत 'न्युटन'मा भारतको राजनीतिक बेथितिको तस्बिर उतारिएको छ।
ब्ल्याक कमेडी 'न्युटन'को केन्द्रमा छत्तीसगढमा हुने निर्वाचन छ। नक्सलवादी छापामार प्रभावित यो क्षेत्रमा हुने निर्वाचन गराउने सरकारी टोलीमा न्युटनलाई खटाइन्छ। निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मुख्य आधार मान्ने न्युटनले त्यहाँ पुगेर अर्कै वास्तविकता देख्छन्, भोग्छन्।
फिल्मले राज्य र छापापारको बन्दुकको चेपुवामा परेका आदिवासीको अवस्था, राज्य र प्रशासनले उनीहरूप्रति गर्ने दुर्व्यहारजस्ता कुरा देखाउँदै निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। न्युटन वैज्ञानिक नभए पनि उनको जीवन बाँच्ने आफ्नै सिद्धान्त छ। निर्वाचनका लागि अनिच्छुक सैनिक अधिकारीको विपक्षमा उभिने क्रममा न्युटन पात्रको सिद्धान्त फिल्ममा प्रकट हुन्छ।
धेरै समीक्षकहरुले न्युटन पात्रलाई दलित प्रतिनिधि मान्दै मुख्य पात्र र फिल्मको सराहना गरेको पाइन्छ। फिल्ममा आम सरकारी कर्मचारीका रुपमा राजकुमार रावले राम्रो अभिनय गरेकै छन्, साथमा सैनिक अधिकारी पंकज त्रिपाठीको चरित्र र अभिनय पनि उत्तिकै गज्जब छ।
बर्लिन इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा पुरस्कृत 'न्युटन' अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा प्रदर्शन भई पुरस्कार जितेको फिल्म हो।यसले वर्षकै उत्कृष्ट फिल्मका रूपमा भारतको नेसनल फिल्म अवार्ड जितेको थियो।
यस वर्षको पद्मश्री पुरस्कार सञ्जीव उप्रेतीको ‘हंस’ लाई